अफगानिस्तानमा तालिबानमाथि ब’म खसाल्ने लडाकु विमान कसका हुन् ? — Sanchar Kendra
काठमाडौं। अफगानिस्तानको पंजशीरमा हालै तालिबानले कब्जा गरेको दावी गरेको थियो । तर, यो दावीपछिको रातमा आश्चर्यजनक घटना भयो । सोमबार अबेर राती पंजशीरमा तालिबानको अड्डामा लडाकु जहाजले ब’म खसाले । रिपोर्टमा तालिबानको अड्डामा भारी नोक्सान भएको दावी गरिएको छ । यो हवाइ आक्रमण गर्ने जहाजहरु अज्ञात छन् र अब यो आ’क्रमण कसले गरेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तालिबानले अब पंजशीरमा आफ्नो नियन्त्रण भएको र अफगानिस्तानको युद्ध समाप्त भएको दावी गरेको छ । तर, पंजशीरको जमिनमा युद्ध लडिरहेका नर्दर्न एलायन्सका लाडाकुहरु र तिनीहरुमा प्रमुख अहमद मसुदले भने आफूहरु रगतको अन्तिम थोपा रहँदासम्म लड्ने बताएका छन् । यस्तोमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ कि तालिबानलाई यो आक्रमण कसले गर्यो ?
त्यस्तै तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा आएसँगै महिला अधिकार कुण्ठित हुने र उनीहरुले पढ्न नपाउने साथै घर बाहिरको काम गर्न नपाउने नियम लागू हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो।
तालिबानले दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तानबाट छिट्टै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्‍यो। सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा उनीहरूले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्तमाथि कब्जा गरे।
त्यसले तालिबानहरूले आफ्नो अतिवादी सिद्धान्त नभई रणनीति मात्रै परिवर्तन गरेको देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनबिना सरकारको कमजोर अवस्थालाई लिएर अफगान अधिकारीहरूको गम्भीर चिन्ताबीच अमेरिकी नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले सेप्टेम्बर ११ सम्ममा अमेरिकी फौजको फिर्ती प्रक्रिया टुङ्ग्याउने घोषणा गत एप्रिलमा गरेका थिए। त्यो बेला विश्व व्यापार सङ्गठनमाथि ह’मला भएको दुई दशक पूरा हुनेछ।बीबीसीबाट